CUTUBKA DOORASHADA - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Publicerat torsdag 31 augusti 2006 kl 08.49
Xisbiga Socialdemokra-ku wuxuu doorashada kaga qeyb qadan doonaan iyaga oo tiigsanaya aqlabiyad guud. Sidaa daraadeed ayuu xisbigu soo bandhigi doonaa bisha Agoosto 2006-da barnaamijkisa doorashada. Xisbiga Bidixda iyo kan Cimiladu o ey xuufo ahaayen muddo dhowr sannadood xisbiga talada dalka haya e Socialdemokrat-ka – ey shuruud uga dhigeen xisbigaa sidii uu uga qeyb gelin lahaa xubnaha dawladda, inkasta o labada xisbi qudhoodu ey doorashada kaga qeyb aadan doonan barnaamijo mid walba u gaar ah.
Sida daraaded waxaa la oran karaa in xisbiyada ku bahoobey bidixdu aaney aheyn kuwo meel ka soo wada jeeda.
Dhanka kal xisbiyada ku bahobey midigta ee afarta ayaa doorashada kaga qeybgelaya iyaga oo ku mdeysan ”isutagga Iswidhen” waxa ey ugu magacdareen. Sida daraadeedna e soo bandhigi doonan qorshe y u dhan yihiin.
6 boqolkiiba mise 20 boqolkiiba miyey gaarsiisan tahey shaqa la’aanta?
Mid kamid ah waxyabaha ugu muhiimsan ee doorashada waxey tahey shaqada.
Tirada dadyowga ey shaqa la’antu asiibty ee dadka shaqeyn kara ayaa hoos u gaadhey lix boqolkiiba, oo ey hoos u dhacdey 1% kolka loo barardhigo sannadkii hore wakhtigan oo kale. Xita waxaa hoos u dhacey tirada shaqa la’anta. Bishii Juun ee sannadkan waxey shaqa la’ani heysatey 298 kun, kolka loo barbardhigo bishii Juun ee snnadkii 2005-ti oo ey gaarsiisneyd 331 kun oo ruux ( - 33 000) (laga soo xigtey heyadda SCB ee tirakoobka).
Bilowgii bishii Juun 3,34 boqolkiiba ama 132 kun o ruux ayaa qeyb ka ahaa qorshoyinka kala duwan ee suuqa shaqada, kuna xiran konjunkturberoende, sida ku cad tirakoob ka soo baxey heyadda AMS. Tiradasi ayaa kor u kacdey 21 kun kolka loo barbardhigo bishii Juun ee sannadkii 2005.
Xisbiyada mucaaradka ayaa tirada shaqa a’aanta ku tiriya dadyowga mudada dheer shaqada ku jirey iyo dadowga howlgabka horey u galy ( dadyoowga aaney da’doodu garin middii howlgabka ee jeclaan lahaa iney shaa bilaabaan) – middaasina oo ey ku shegaan in dadyoowga shaqa la’aantu ku habsatey ey tiradoodu gareyso 1,5 malyuun, ama 20 boqolkiiba ddka gaarey da’dii shaqada.
Xisbiga talada dalka gacanta ku haya (s) iyo xibiyada ey xulufada yihiin ee (v och mp) ayaa ka mideysan sidii ey u dhimi lahaayen shaqa l’aanta iyada oo la adeegsaneyo gaar ahaan: mushaarada oo ey dawladdu bixisi. Shaqa bixiyuhu wuxuu u bahan yahey oo keliya inuu dhiibo qeyb yar ee ka mid ah mushaarka u siineyo kolka uu howlgeliyo cid muddo dheer ka maqnyd suuqa shaqada. Iyada oo la isticmaaleyo dhaqale ey dwladdu bixiso in laga abuuro goobaha shaqada, goobo ey tabababr lagu qato, goobo waxbarasho ee dhallinyarada iyo dad lagu howlgeliyo ku simid shaqo.
Xisbiyadu waxey kaloo ballan qaadayaan in laga dhimo shirkadha yar yar, cashuuraha ey bixiyaan.
Inta waxaa dher in xisbiyada s, v iyo mp ey xafiisyda shaqa raadintu kor u sii qadaan kartidooda howled, dib shaqa ugu celin xilliga dhaqaaluhu kor u kacayo ”en bra konjunktur”.
Xisbiga bidixda ”Vänsterpartiet” vwuxuu damacsan yahey in laga abuuro heyadaha dawladda 200 000 oo goobo shaqo heyadahasin oo ey bahi weyn u qabaan shaqaalahaa”. Xisbigu wuxuu kaloo doonya in shirkadaha aaney ka shaqeyn dad tiradoou toban kor u dhaafyso laga daayo musharadda ey siiyan kolka uu shakhsi ka xanuunsado (*).
Xisbiga cimilada ”Miljöpartiet” vwuxuu dooneyaa inuu sacadaha shqada e toddobaadka gaarsiiyo 35 sacadood toddobadkii. Xisbigu wuxuu kaloo ku tala jiraa inuu qeyb ka mid ah miisaaniyadda heyada shaqada ee AMS (*) ka abuuro heyadaha dawladda (*) goobooyin shaqo ee gaareya 40 000.
Xisbiyada burjuwaasiga e Midigta ”Den borgerliga Alliansen” ee (m, fp, kd, c) waxey qorsheysanayan sidi lagu abuuri lahaa shaqooyin heerad ah iyada oo la dhimeyo cashuurta dakhliga (*) iyo iyada oo lo fududyneyo hirkadaha, tallaabooyinka la adeegsanayana yihiin kuwan:
Cashuurta oo laga dhimo shaqaalaha qata mushaarooyinka hoose iyo kuwa dhexe (*) shaqale cadiyah wuaxa bishii soo geli doonta lacag dhan 1000 koron oo dheeriya bishiiba – ”waxey nooneysa shaqadu mid fa’iido loo daremo” Shaqooyin cusub oo la abuuro – in la jaro dhammaan khidmadda howlgelinta (*) ee laga aado shirkadda howlgelisa cid shaqa la’an ku sugneyd ugu yaraan mudo hal sanno garsiisan, ( dhallinyaradana haddii ey shaqa k maqnaayen muddo lix biood garysa) Cashuurta iyo khidmadda howlgwlinta oo laga dhimo shirkadaha howlgeliya ruux u dhaxeyso 19 illaa iyo 24-tan.Cashuurta iyo khidmadda howlgwlinta oo laga dhimo shirkadaha howlgeliya ruux da’diisu kor u dhaftey 65 sannadood. Bar in laga dhimo hoowlaha u dhigma kuwa guriga laga abto (*)In la baabi’iyo khidamdaha laga bixiyo qaar ka mid ah howlaha adeegga (*)In la babiyo mushaarooyinka ey siiyan shaqa bixiyeyashu wixii ka dambeeya wiigga labad ee shaqaalahoodu jirada ku qoran yahy
Isbeddelladasi waxey hoos u dhimayaan dakhliga dawladda lacag gaareysa 52 milyaardi ( dhimidda ugu weynina ee gaarysa 37 milyaardi ka imanyso cashuurt dakhliga oo la dhimo).
Xisbiyada midigta waxey ku tala jiran sidii ey ku dhaqale gelin lahaayen dakhligaa qasnadda siyaabahan: iyada oo la waajibiyo bixinta dhaqalaha loo yaqan A-kassa-da (*), khidmada oo kor loo qado, islamarkaana la dhimo qiimaha A-kassa-da shakhsiga la siiyo ( waxey miisaaniyadda dawladda ku soo kordhineysa 11 milyaardi), iyada oo la babi’yo waxa loo yaqan sannadka fasxa ”friåret” (*) islamarkaana la dhimo masuuliyadda dawladda ee shillka gawaarida samt minskat statligt åtagande vid trafikolyckor. Waxaa kaloo maalgelintaa ka mid ah in aan kor loo qaadin saqafka ceymiska (*), sida ey go’ansaden xisbiyada s, v iyo mp.
Xisbiga dhexe ”Centern-ka” ayaa isagu qba fikir u gar ee la xiriira sidii lagu dhimi laha sahaqa la’anta dhallinyarda – heshiis gar ah ee sameeya dhallinyarda da’doodu ka yar tahy 26 sannadood. Waxaa la sahlaya sidii lagu shaqa gelin laha iyo sidii shaqada looga eryi kari lahaa si sahlan.